Bit By Bit - Isingeniso - 1.1 An isisihla uyinki
1.1 An isisihla uyinki
1.2 Welcome to the age digital
1.3 Ucwaningo design
1.4 Izihloko zale ncwadi
1.4.1 Readymades futhi Custommades
1.4.2 Ilula phezu yinkimbinkimbi
1.4.3 Ethics yonke indawo
1.5 Uhlaka ncwadi
2 Ukuqaphela ukuziphatha
2.2 idatha Big
2.3 ezijayelekileko idatha big
2.3.1 Izimpawu ukuthi ngokuvamile kuhle ucwaningo
2.3.2 Izimpawu ukuthi ngokuvamile ezimbi ucwaningo
2.3.2.4 ephephukala phansi
2.3.2.5 Algorithmically ngajabha
2.4 Amasu Ucwaningo
2.4.1 Counting izinto
2.4.1.1 Taxis eNew York City
2.4.1.2 Friendship kumiswa kubafundi
2.4.1.3 Imingcele of social media nguhulumeni Chinese
2.4.2 Ukubikezela kanye nowcasting
2.4.3 nemaresiphi Approximating
2.4.3.1 nemaresiphi Natural
I-appendix ye Technical
3 imibuzo Ukubuza
3.2 Ukubuza vs. kokubona
3.3 Inani uhlaka Iphutha inhlolovo
3.4 Ubani ukubuza
3.4.1 Amathuba izibonelo zalokho: iqoqo idatha kanye nedatha analysis
3.4.2 Non-okungenzeka amasampula: sisindvo
3.4.3 Non-okungenzeka amasampula: sample elihamelanayo
3.5 Izindlela ezintsha kokubuza imibuzo
3.5.1 kwezivivinyo Ecological besikhashana
3.6 Surveys kuhlobene nenye idatha
3.6.1 Amplified becela
3.6.2 ukubuza kwakucebisa
4 Running nemaresiphi
4.2 Ziyini kwenziwa ucwaningo?
4.3 amabili Ubukhulu ucwaningo: lab-field and analog-digital
4.4 Moving ngaphesheya kwenziwa ucwaningo elula
4.4.2 Heterogeneity yemiphumela yokwelashwa
4.5 Ukwenza kwenzeke
4.5.1 Just do it ngokwakho
4.5.1.1 Izimo Sebenzisa ekhona
4.5.1.2 Yakha ukuhlolwa kwakho siqu
4.5.1.3 Yakha umkhiqizo wakho siqu
4.5.2 Ukubambisana nezinkampani enamandla
4.6.1 Yakha zero nedatha yezindleko variable
4.6.2 Miselela, kangcono, futhi Nciphisa
5 Mass ngokubambisana
5.2 kathisha Human
5.2.2 Isixuku-esephepheni of manifestos ezombusazwe
5.3 Vula izingcingo
5.4 Okusatshalalisiwe iqoqo idatha
5.5 Ukwakhela siqu sakho
5.5.1 Zikhuthaze abahlanganyeli
5.5.2 Thola heterogeneity
5.5.3 ukunakwa Focus
5.5.4 Nika amandla ukumangala
5.5.5 Be zesimilo
5.5.6 Final design iseluleko
6.2 Izibonelo ezintathu
6.2.2 Taste, Ties, futhi Time
6.3 Digital uhlukile
6.4 Four izimiso
6.4.1 Ukuhlonipha Persons
6.4.4 Inhlonipho Law and Public Interest
6.5 Two izinhlaka eziphathelene nezimiso zokuziphatha
6.6 Izindawo nobunzima
6.6.1 kwemvume unolwazi
6.6.2 Ukuqonda nokuphatha ubungozi lwati
6.6.4 Ukwenza izinqumo ngaphakathi the bombo of ukungaqiniseki
6.7 Amathiphu ezingokoqobo
6.7.1 I IRB kuyinto floor, hhayi ophahleni
6.7.2 Zibeke izicathulo wonke umuntu
6.7.3 Cabanga kwesimilo nokucwaninga ngendlela eqhubekayo, hhayi leyehlukene
I-appendix ye Historical
7.1 Looking ungasithumela
7.2 Izihloko of the esizayo
7.2.1 I Ukuxubana Readymades futhi Custommades
7.2.2 Umbambiqhaza kwesakhe iqoqo idatha
7.2.3 Ethics in design ucwaningo
7.3 Emuva ekuqaleni
Le nguqulo wadalwa computer. ×
Ehlobo lika-2009, Pop ukushaya kuwo wonke Rwanda. Ngaphezu izigidi izingcingo phakathi umndeni, abangane, kanye nabo ebhizinisini, eRwanda mayelana 1,000 wathola ucingo oluvela uJoshuwa Blumenstock nozakwabo. Abacwaningi base befundela ingcebo nomtlhago kokwenza inhlolo-vo abantu ababekade ngezikhathi ezisuka kubantu database 1.5 million amakhasimende kusuka kwekulu mobile umhlinzeki phone laseRwanda. Blumenstock kanye nozakwabo wabuza abawugijimayo uma befuna ukuba uhlanganyele esikweni inhlolovo, bamchazela ucwaningo kubo, bese wababuza imibuzo mayelana nezici zabo indaba ekhanga abantu babo, zezenhlalo nezomnotho.
Konke ngishilo kuze kube manje kwenza lokhu kuzwakala njengephupho bendabuko social science inhlolovo. Kodwa, yini lefikako olandelayo akuyona bendabuko, okungenani hhayi okwamanje. Babesebenzisa idatha inhlolovo ukuqeqesha umshini model yokufunda ukubikezela umcebo kothile kusukela idatha yabo call, bese basebenzisa lokhu model ukulinganisa ngokuqinisekile umcebo wazo zonke amakhasimende 1.5 million. Okulandelayo, balinganisela endaweni ohlala wonke amakhasimende 1.5 million ngokusebenzisa ulwazi ngokwezwe linamathele call izingodo. Ukubeka lezi tilinganiso ezimbili ndawonye-ingcebo kulinganiselwa nendawo kulinganiselwa ohlala-Blumenstock kanye nozakwabo sakwazi ukuba ukukhiqiza high-resolution izilinganiso ukusatshalaliswa kwendawo ingcebo yonkana Rwanda. Ikakhulu, babekwazi ikhiqiza ingcebo kulinganiselwa for ngayinye amangqamuzana laseRwanda 2.148, kwesincane kunazo zonke unit zokuphatha kuleli lizwe.
Kwakunzima ukuqinisekisa lezi tilinganiso ngoba akekho omunye umuntu owake wambonisa kukhiqizwa izilinganiso for izindawo ezinengozi enjalo ezincane ngokwezwe eRwanda. Kodwa, lapho Blumenstock kanye nozakwabo uquqaba izilinganiso zabo ezifundeni laseRwanda 30, bafumana ukuthi izilinganiso zabo zazifana tilinganiso kusukela lwenhlalo yabantu and Health Survey, indinganiso igolide vo emazweni asathuthuka. Nakuba lezi zindlela ezimbili akhiqizwa tilinganiso ezifanayo kuleli cala, njengoba kusondela Blumenstock kanye nozakwabo iyashesha futhi 10 izikhathi ushibhile izikhathi ezingaphezu kuka-50 bendabuko lokubalwa kwabantu kanye Health Surveys. Lezi ephawulekayo ngokushesha futhi aphansi izindleko tilinganiso ukudala amathuba amasha kubacwaningi, ohulumeni, kanye nezinkampani (Blumenstock, Cadamuro, and On 2015) .
Ngaphezu asathuthuka indlela entsha, lesi sifundo Kusinda like a Rorschach Inkblot test; ukuthi abantu babona ini incike isizinda sabo. Ososayensi abaningi social ukubona ithuluzi elisha nesilinganiso engasetshenziswa ukuze ahlole imibono mayelana nokuthuthukiswa komnotho. Ososayensi abaningi idatha ubone cool entsha inkinga yokufunda umshini. Abantu abaningi bezebhizinisi ubone ndlela elinamandla ekwambuleni value in the digital trace idatha ukuthi baye baqoqa kakade. Abameli abaningi ubumfihlo ukubona isikhumbuzi scary ukuthi siphila esikhathini ukubhekwa mass. Abenzi abaningi inqubomgomo ukubona indlela ukuthi ubuchwepheshe obusha kungasiza ukudala umhlaba ongcono. Eqinisweni, lesi sifundo zonke lezo zinto, futhi yingakho-ke kuveza esizayo yocwaningo social.